Dil ka dhacay Magaalada Baladweyne iyo faah faahin laga helay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dil ka dhacay Magaalada Baladweyne iyo faah faahin laga helay
Ardaan Yare 3 March 2021
Rag la sheegay inay ku hubeysnaayeen Tooreey ama Mindi ayaa waxaa ay xalay Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ku dileen Wiil Dhalinyaro ahaa oo kamid ahaa dhalinta ku nool Magaaladaas.
Wiilka oo lagu Magacaabi jiray Shakuur Maxamed Beyle ayaa dilkiisa waxaa uu ka dhacay Xafaadda Xaawo-Taako gaar ahaan laanta Dhagax-jibis, waxana la sheegay in rag watay mooto Bajaaj oo doonayay in ay mobile ka dhacaan ay dileen.
“Rag Burcad ah oo watay Mooto Bajaaj ayaa tooreey ula soo baxay si ay Mobil-ka uu watay uga qaatan, balse wuu ka diiday, tooreey ayayna ku dhufteen dhaawac culus oo soo gaaray ayuu u geeriyooday waana ay baxsadeen burcadda, iyaga oo an ka qaadan talefoonka ayuu yiri” Qof kamid ah dadka Magaalada Beledweyne.
Laamaha Amniga Magaalada Beledweyne ayaa dilkaasi kadib waxaa ay sameeyeen howlgallo ay ku baadi goobayeen dadkii ka dambeeyay dilka, hayeeshee kuma guuleysan inay gacanta ku dhigaan.
Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa bilihii la soo dhaafay amnigeeda waxaa uu ahaa mid aan wanaagsaneyn, waxaana lagu dilay, guddoomiye Xaafadeedyo iyo Askar, dilalkaas oo mas’uuliyadeed ay sheegteen Al-Shabaab.
Puntland oo shuruud ku xirtay ka qeyb galka shirka uu ku baaqay Farmaajo
Masar iyo Suadan oo gaashanka ku dhuftay qorshe ay wado Itoobiya